10 Skyscrapers tsara indrindra eran-tany | Save A Train
an-trano > Travel Europe > 10 Skyscrapers tsara indrindra eran-tany
Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Japana, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel UK, Train Travel USA, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 05/11/2021)
Miakatra any an-danitra, manaraka 10 ny trano avo indrindra eran-tany dia sangan'asan'ny mpanao mari-trano tsara indrindra eran-tany. Fampifangaroana singa futuristic, endri-javatra maharitra sy maitso, ireo 10 trano tsara tarehy ihany koa no anisan'ny toerana be mpitsidika indrindra maneran-tany.
Rail Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, ny Tranokala tapakila tapakila mora indrindra Eto amin'izao tontolo izao.
1. Skyscrapers tsara indrindra eran-tany: Ny Shard
306 metatra ny haavony, Ny tilikambo Shard no skyscraper fantatra indrindra any Londres. miaraka ny sehatra fijerena tsara indrindra any Londres, afaka mahita ny lanitry ny tanàna tsara tarehy avy amin'ny tafon'ny trano avo ianao. Ny sehatra fijerena dia 244 metatra ary manolotra fomba fijery saika manerana ny zorony tsirairay ao London.
Nisokatra tao 2003, manintona mpitsidika manerana izao tontolo izao ny Shard. Ny ankamaroany dia satria ny endrika maritrano tsy manam-paharoa dia miavaka amin'ireo trano avo rehetra eran'izao tontolo izao. Ny endriky ny Shard dia misy sombin-javatra fitaratra ary natao ho toy ny fitaratra, misy 11,000 tontonana fitaratra amin'ny fananganana ny Shard. Noho izany, rehefa any Londres dia mendrika ny fitsidihana, miaraka amin'ny sakafo hariva amin'ny filentehan'ny masoandro ao amin'ny trano fisakafoanana Shard amin'ny gorodona 31-33, ambony indrindra any UK.
Bruxelles mankany Londres miaraka amina lamasinina
2. Skyscrapers tsara indrindra eran-tany: Evolution Tower Moscow
246 metatra ny haavony, Ny Tilikambon'ny Evolisiona miolikolika ao Moskoa dia iray amin'ireo trano avo indrindra eran-tany. Manjaka amin'ny distrikan'ny fandraharahan'i Moskoa ao an-tanànan'i Moskoa ilay trano avo tsara tarehy ary mitazana ny Reniranon'i Moskoa. Miaraka amin'ny gara metro, toeram-pivarotana, anjara fanompoana, ary faritra maitso, ny Evolution Tower dia iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra ao Moskoa.
Mahavariana sy mampitolagaga ny rafitra ara-javakanto, manao ny Evolution ho iray amin'ireo ireo toerana mahavariana indrindra hitsidika an'i Russia. Noho izany, Tsy ilaina ny milaza fa ny skyscraper Rosiana dia manasongadina sary fitsangatsanganana maro manerana an'izao tontolo izao ary loharano maka tahaka ho an'ny mpanao mari-trano sy injeniera manerantany.
3. Skyscrapers tsara indrindra eran-tany: Empire State Building
Trano birao malaza indrindra eran-tany, ny Empire State Building hatramin'izay 1931. Ny scraper New York miavaka dia naorina tamin'ny taona 1920 tamin'ny hazakazaka hananganana trano avo indrindra eran-tany.. Ny Empire State Building dia nandresy tamin'ny hazakazaka rehefa nanamboatra tranoben'ny tranoben'i Manhattan ny architects Raskob sy Smith. 381 metatra.
Ny Empire State Building dia iray amin'ireo mari-pamantarana tsy maintsy jerena ao New York. Avy amin'ny rihana faha-38, afaka miarahaba ny fiposahan'ny masoandro miaraka amin'ny tanàna tsy matory ianao. Miaraka amin'ny fomba fijery ny Central Park, Fifth Avenue mankany Times Square, tsy hay hadinoina ny fomba fijery avy ao amin'ny Empire State Building.
4. Tilikambon'i Shanghai
Ny skyscraper faharoa avo indrindra eran-tany, Tonga ny tilikambo Shanghai 632 metatra. Mifehy ny lanitra manaitra ny lanitra ao Shanghai, Ny Shanghai Tower dia manana sehatra fijerena avo indrindra eran'izao tontolo izao izay manolotra fomba fijery an'i Shanghai mandritra ny taona.
Ny endri-javatra tsy manam-paharoa fanampiny dia misy fasadin'ny fitaratra, miaraka amin'ny tampony mihodinkodina, ary ny iray amin'ireo endri-javatra mahavariana indrindra dia ny efitrano anatiny maitso. Ankoatra ny endrika maitso, ny tilikambo dia natao ho toy ny tanàna ao anatiny, hotely, toeram-pivarotana, anjara fanompoana, ary toerana ho an'ny besinimaro. Shanghai Tower dia tsy iray amin'ireo ihany 10 trano avo indrindra eran-tany, fa io koa no lehibe indrindra, miaraka amin'ny fahafahana mandray 16,000 People.
Manjakazaka amin'ny lanitr'i Hong Kong, ny tranoben'ny Bank of China dia iray amin'ireo trano avo indrindra any Shina. amin'ny 367 metatra, Ny Bank of China Tower dia iray amin'ireo trano avo indrindra eran-tany ary tranobe malaza indrindra ao afovoan'i Hong Kong.. Miaraka amin'ny sisiny maranitra sy endrika telozoro amin'ny ivelany, ny Bank of China dia hitazona anao mandritra ny ora maro.
Raha ny ankamaroan'ny mpitsidika any Hong Kong dia mahita fa tsy manam-paharoa io skyscraper io, misy vitsivitsy tsy mahataitra. Ny antony dia ireo endri-javatra izay mampiavaka ny BOC amin'ny hafa trano tsara tarehy any Sina. Ny sisiny maranitra sy X, dia marika ratsy ao amin'ny Feng Shui. na izany aza, ny vintana ratsy mety ho ratsy dia tsy manakana ny mpandeha tsy hidera an'io hatsarana ara-javakanto io isan'andro.
Iray amin'ny 10 trano avo indrindra eran-tany, dia toeram-pialan-tsasatra. Ny Marina Sands dia miatrika ny Marina Bay, miaraka amin'ny trano fisakafoanana, ny Casino, teatra, amin'ny tilikambo telo, mifandray amin'ny SkyPark mirefy 340 metatra. Ankoatry ny, ny complex mahagaga indrindra dia manana dobo infinity avo indrindra eran-tany.
Ny mpanao mari-trano Moshe Safdie dia nanazava fa ny endriky ny trano avo dia aingam-panahy avy amin'ny tokotanin'ny karatra.. Misy fomba fijery mahavariana an'i Singapore avy amin'ny dobo infinity, ao amin'ny rihana faha-57. Ankoatry ny, Afaka mankafy ilay tranoben'ny Marina Bay Sands mahavariana avy ao amin'ny Gardens by The Bay ianao, toerana mahafinaritra hafa hitsidihana an'i Singapore.
7. Skyscrapers tsara indrindra eran-tany: Tokyo Skytree
miaraka 2 toeram-pandinihana, ny skyscraper Tokyo Skytree dia iray amin'ireo trano avo dimy ambony indrindra eran-tany. amin'ny 634 metatra, afaka mahazo kafe amin'ny kafe avo indrindra eran-tany ianao, miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana an'i Tokyo. Skytree dia naorina ho fahitalavitra sy tilikambo fampielezam-peo ary taty aoriana dia lasa toerana manan-danja indrindra ao Tokyo..
Ankoatra ny toeram-pandinihana, ary cafe, Afaka mitsidika aquarium sy planetarium ianao eo amin'ny fotony. Ny efitrano fandinihan-tena dia manolotra 360 fomba fijery ny tanàna futuristika sy mampientam-po indrindra ao Japana, sy Azia. Ny ambany, tongava miomana handany andro feno hankafy ny fomba fijery sy hitsidika ireo fotodrafitrasa mahatalanjona maro ao amin'ny skyscraper Skytree ao Tokyo.
Venise mankany Roma miaraka amina lamasinina
Shina dia fifangaroan'ny maoderina sy ny fahiny, izay misy tempoly mivelona eo akaikin'ny trano avo mitsangana eny amin'ny rahona. Iray amin'ny ireo toerana tsara hitsidihana any Sina dia Guangzhou sy ny Tilikambon'i Canton astronomika. Amin'ny epic 604 metatra ny haavony, Ny Canton Tower dia tazana avy amin'ny toerana rehetra ao Guangzhou.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra atao ao amin'ny Canton Tower dia ny fandehanana tram any an-tampony. Noho izany, raha tsy matahotra ny avo ianao, tonga alina, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo to a viewing deck ticket, Ny fitsidihana Canton Tower dia traikefa miavaka ary mihoatra noho ny fijoroana eo amin'ny valanoranony fototra.
Tafiditra any Zurich miaraka amina lamasinina
Lucerne mankany Zurich miaraka amina lamasinina
Bern mankany Zurich miaraka amina lamasinina
Geneva mankany Zurich miaraka amina lamasinina
9. Ny tranobe iraisam-pirenena Liebian
Ny riandrano lehibe indrindra nataon'olombelona dia endri-javatra mahatalanjona amin'ny skyscraper manaitra indrindra eran-tany. Ny skyscraper Liebian International dia 121 metatra ny haavony ary misy riandrano eo ambonin'ny fasany. Ny riandrano avo indrindra dia mamahana paompy efatra sy rotsak'orana eo amin'ny fotony. Afaka mahita an'io trano miavaka io ianao amin'ny dianao any Chine, indrindra any Guiyang, any Atsimo Andrefana Sina.
Ny tranoben'i Liebian dia mety tsy ny avo indrindra eran-tany, nefa azo antoka fa iray amin'ireo ambony indrindra 5 trano avo indrindra eran-tany.
10. Skyscrapers tsara indrindra eran-tany: Agbar Tower Barcelona
Torre Glories dia tranoben'ny lanitra miavaka amin'ireo mari-pamantarana tsara tarehy ao Barcelona. Ny 38-tantara 144 metatra skyscraper dia ny famoronana mpanao mari-trano frantsay. Manana endrika geyser miakatra eny amin'ny lanitra ilay trano avo tsara tarehy ary natao taorian'ny tendrombohitra Montserrat. Raha mijery akaiky kokoa ianao dia ho hitanao fa vita amin'ny fitaratra ny fasana manontolo.
na izany aza, Ny endri-javatra manaitra indrindra amin'ny Tilikambon'i Agbar dia ny hazavana miloko. Ny skyscraper Espaniola dia manana 4,500 LED fitaovana. Ireo fitaovana LED ireo dia mampiseho sary ary afaka mamokatra 16 loko tapitrisa. Ary, Raha mihodidina ny Tilikambon'i Agbar ianao dia ho tsikaritrao ny fanondroana toerana iray hafa mahagaga, Ny fianakavian'i Sagrada an'i Gaudi. Noho izany, amin'ny fotoana rehetra te-hitsidika an'io skyscraper tsara tarehy io ianao, miomàna hankafy azy mandritra ny andro.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao hanomana dia ho any amin'ny 10 trano avo indrindra eran-tany amin'ny lamasinina.
Tianao ve ny hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay "10 Skyscrapers Tsara Indrindra Eran-tany" ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Torohevitra Eco Travel, Train Travel, Train Travel Austria, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Train Travel, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel UK